Cuntada - Bisadaha Noti | Bisadaha Noti (Bogga 2)
Tuna ma u roon yahay bisadaha?
Ma jeclaan laheyd inaad ogaato haddii tuna ay u fiican tahay bisadaha? Hadday sidaas tahay, ha ka waaban: soo gal oo waxaan uga jawaabi doonnaa su'aashaada si aad mar walba ugu abaalguddo xubnahaaga xigtada ah.
Bisaduhu Ma Cuni Kartaa Jalaatada?
Bisaduhu Ma Cuni Kartaa Jalaatada? Taasi waa su'aal aan halkaan kaga jawaabi doonno si aad u ogaato haddii dhogortaadu ay sidoo kale ku qaboobi karto mid.
Bisaduhu ma cuni karaan ham?
Ma jeclaan laheyd inaad ogaato haddii bisaduhu cuni karaan ham? Gali oo waxaan xallin doonaa shakiga si aad u ogaato haddii aad ku siin karto dhogortaada iyo in kale.
Nutro, quudin dabiici ah oo loogu talagalay bisadaha
Ma ogtahay in Nutro uu ka mid yahay noocyada ugu caansan ee quudinta? Gali oo soo saar alaabta ay iibiso iyo astaamaha ay yihiin.
Sacab, quudin aan hadhuudh lahayn bisadaha
Ma rabtaa inaad bisaddaada siiso cunno aan hadhuudh lahayn laakiin aanad garanayn midkee? Gali oo waxaan kuu sheegi doonaa nooca Applaws, mid ka mid ah kuwa ugu caansan.
Goobaha Caafimaadka Bisadaha, nooc cusub oo xiiso leh oo ah cunnada bisadaha
Soo ogow bisadaha cunnada bisadaha ee Gormet Health, badeecad gebi ahaanba dabiici ah oo ka farxin doonta saaxiibbadaada afarta lugood leh.
Lifelong iyo Solimo, bisadaha Amazon iyo magacyada cunnada eyga
Ma ogtahay in Amazon ay leedahay cunno u gaar ah eeyaha iyo bisadaha. Gali oo soo hel astaamaha kuwa loogu tala galay jilibyada.
Ma fikrad fiican baa in la siiyo Royal Canin bisadaha?
Royal Canin waa nooc caan ah oo caan ku ah cuntada xayawaanka, laakiin ... sidee ayey ugu fiican yihiin alaabadooda bisadaha?
Astaamaha quudinta Acana
Ma ogid waxa aan damacsan ahay in aan siiyo bisaddaada? Kaalay oo aan kuula socodsiinno magaca Acana, mid ka mid ah kuwa ugu caansan suuqa.
Ma fikrad fiican baa in la haysto weel wax lagu cuno?
Miyaad iibsanaysaa weel cunto ah? Kahor intaadan wax sameyn, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa waxa faa iidada u leh mid yeelashada iyo goorta ay fikrad fiican tahay in la helo.
Waa sidee dhadhanka quudku ee duurjoogta?
Gal si aad wax uga ogaato wax kasta oo ku saabsan Dhadhanka quudinta duurjoogta, cuntooyinka aadka u sarreeya ee aadka u nafaqada badan ee dabiiciga ah ee lagu sameeyo maaddooyinka tayada leh.
Miraha iyo khudaarta laga mamnuucay bisadaha
Maxay yihiin miraha iyo khudaarta laga mamnuucay bisadaha? Gudaha u gal oo iska ilaali inaad dhibaatooyin u keento kuwaaga dhogorta leh. Ha moogaan
Bisaduhu Ma Cuni Kartaa Jiis?
Weligaa ma is weydiisay in bisaduhu cuni karaan farmaajo? Hadday sidaas tahay, gal oo waxaan kuu sheegi doonaa jawaabta su'aashaas. Ha moogaan
Sida loo quudiyo gumeysi bisadaha
Sidee loo quudiyaa gumeysi bisadaha? Haddii aad bilaabayso inaad daryeesho xayawaanka dhogorta badan, soo gal oo waxaan kaaga jawaabi doonnaa su'aashaada si ay u fiicnaadaan.
Maxay u jirtaa quud aan lahayn hadhuudh?
Maxay u jirtaa quudin aan hadhuudh lahayn? Haddii aad wax shaki ah qabtid, gal sidoo kale waxaan kuu sheegi doonnaa faa'iidooyinka ay yihiin.
Saliida saytuunka ma u fiicantahay bisadaha?
Saliida saytuunka ma u fiicantahay bisadaha? Haddii aad jeclaan lahayd inaad ogaato jawaabta su'aashan xiisaha leh, gal oo soo hel.
Bisaduhu Ma Cuni Karaa Miraha Buluugga ah?
Bisaduhu Ma Cuni Karaa Miraha Buluugga ah? Haddii aad wax shaki ah qabtid, gal oo waan kuu sharxi doonnaa haddii ay fikrad fiican tahay in la siiyo iyaga inay isku dayaan ama haddii, liddi ku ah, ay ka fiican tahay maya.
Bisaduhu ma cunaan badarka?
Bisaduhu ma cunaan badarka? Haddii aad jeclaan lahayd inaad ogaato in dhogortaas lagu quudin karo maaddooyinkan, gal oo waxaan ka jawaabi doonnaa su'aashaada.
Kaabisyada dabiiciga ah ee bisadaha
Ma jeclaan lahayd inaad ogaato waxa ay yihiin kaabisyada dabiiciga ah ee bisadaha iyo haddii ay fikrad fiican tahay inay iyagu qaataan? Gali oo waan xallin doonaa shakigaaga. :)
Sidee loo diyaariyaa hilibka bisadaha?
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo diyaariyo hilibka bisadaha. Raadi sida aad ugu quudin karto bisaddaada hab caafimaad leh oo aad ugu hesho caafimaad wanaagsan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan bisadaha naas-nuujinta: goorta iyo sida loo sameeyo, maxay muhiim u tahay inay la joogaan hooyada, iyo inbadan.
Maxey bisadeyda cunin?
Ma waxaad la yaaban tahay sababta bisaddaydu wax u cuni weydo? Hadday sidaas tahay, gal oo raadi waxa sababa cunto la’aantaas iyo waxa aad sameyn karto si aad u caawiso.
Sidee looga ilaaliyaa bisadda inay dhakhso wax u cunto?
Waxaan kuu sheegeynaa sida looga hortago bisadda inay si dhakhso leh wax u cunto si aysan ugu dhicin halista ah inay ku mergato ama ay la kulanto wax dhibaato ah. Soo Galaya
Sidee ayey tahay inay cunnada hypoallergenic ee bisaduhu u noqdaan?
Gali si aad u ogaato sida ay tahay cunnada hypoallergenic ee bisaduhu, oo aad u hesho dhogortaada si aad u hesho caafimaad wanaagsan adiga oo siinaya cunto tayo leh.
Muxuu ka kooban yahay quudinta bisadaha la nadiifiyay?
Waxaan kuu sheegi doonaa sida ay u kooban tahay cunnada bisadda ee jeermiska laga dilay iyo sida ay u tahay inay ahaato mid tayo wanaagsan leh si ay dhogortaadu u jeclaato oo ay wanaag u dareento.
Sidee ayey u tahay cunnada bisadaha leh cagaarshow?
Waxaan kuu sheegi doonaa sida ay tahay in cunnada bisadaha leh cagaarshowga ay noqdaan sidaa darteed, habkan, waxaad uga caawin kartaa iyaga inay ka caafimaad roonaadaan.
Malabku ma u roon yahay bisadaha?
Ma isweydiineysaa in malabku bisadaha u fiicanyahay? Hadday sidaas tahay, gal oo waxaad kaloo ogaan doontaa inta jeer iyo inta aad siin karto.
Maxay yihiin cuntooyinka hodanka ku ah birta bisadaha?
Waxaan kuu sheegeynaa waa maxay neefta birta ku badan ee bisadaha iyo sababta ay muhiim u tahay in la siiyo macdantaan. Soo gal oo soo ogow.
Muxuu ka kooban yahay cuntada bisadu?
Waxaan kuu sheegaynaa waxa ay ka kooban yihiin cunnada bisadu iyo sida loo turjumo sumadda waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Faa'iidooyinka cuntada bisadaha qoyan
Maxay yihiin faa'iidooyinka cuntada bisadda qoyan? Haddii aad rabto inaad ogaato sababta aadka loogu talinayo inaad siiso cunnadan noocaaga ah dhogortaada, gal.
Waa maxay quudinta bilaa badarka ah ee bisadaha
Ma ogtahay waxa ay tahay quudinta aan hadhuudhka lahayn? Haddii aad rabto inaad ku quudiso dhogortaada cunno tayo sare leh, sidaasna ku gaadho caafimaad wanaagsan, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa waxa faa'iidooyinkiisu yihiin
Waa maxay dheefshiidka cuntada bisadu
Waa maxay dheefshiidka cuntada bisadu? Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo kala sooco quudinta wanaagsan iyo kuwa aan ahayn, gal.
Waa maxay quudinta guud
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay tahay quudinta guud si aad bisadaada u siin karto cunto tayo sare leh, sidaasna ku hormarinaysa habka difaaca jirka.
Maxay ku kala duwan yihiin quudinta bisadaha iyo eeyaha?
Maxay ku kala duwan yihiin quudinta bisadaha iyo eeyaha? Haddii aad rabto inaad ogaato sababta aadan u siin karin cunnada eyda bisadaha, soo gal oo waxaan ka jawaabi doonnaa su'aashaada.
Immisa jeer maalintii ayaan quudiyaa bisadayda
Immisa jeer maalintii ayaan quudiyaa bisadayda? Haddii aad shaki ka qabtid, dhammaantood waan xallin doonaa. Gali oo soo ogow inta dhogortaadu cunayso.
Sida loo doorto quudinta wanaagsan ee kittens
Waxaan kaa caawinaynaa inaad ogaato sida loo doorto quudinta wanaagsan ee kittens. Soo gal oo raadi waxa ay tahay inaad xidhato si ay ugu koraan iyagoo caafimaad qaba oo xoog badan.
Cunto loogu talagalay bisadaha cayilan
Waxaan kuu sheegeynaa sida ay noqoneyso cuntada bisadaha cayilan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku siineynaa talooyin badan oo kaa caawinaya inaad dib u soo ceshato miisaankaaga wanaagsan.
Ma noqon kartaa bisad khudradeed?
Weligaa ma isweydiisay inay noqon karto bisad khudradeed? Haddii aad wax shaki ah qabtid, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa nooca cuntada aad siin karto.
Sidee loo quudiyaa bisad aan rabin inay wax cunto
Dhogortaadu way murugeysan tahay oo ma rabto inay cunaan qaniinyo? Raadi sida loo quudiyo bisad aan rabin inay wax cunto, oo ka caawi inuu horumariyo.
Cunnooyinka hodanka ku ah taurine ee bisadaha
Waa amino acid muhiim u ah u shaqeynta jirka saaxiibkeen. Isaga sii cuntooyinkan hodanka ku ah bisadaha bisadaha waana hubaal inuu ka bogsan doono.
Bisaduhu Ma Cuni Karaa Cawska?
Weligaa ma isweydiisay bisaduhu ma cuni kartaa caarada badda? Haddii aad rabto inaad ogaato jawaabta, ha ka waaban inaad gasho.
Sidee loo quudiyaa bisad?
Daryeelka eeyga dhogorta leh waxay qaadataa waqti iyo dulqaad badan. Haddii aad mid heshay, waxaan kuu sharxeynaa sida loo siiyo nuujiyaha si ay caafimaad ugu koraan.
Sidee ayey u ekaaneysaa cunnada bisad leh sonkorow?
Cadhadaada cadho ma laga helay cudurkaan? Ka caawi inuu dib u helo caafimaadkiisa. Gali oo waxaan kuu sheegi doonaa sida ay cuntada u noqoneyso bisad sonkorow leh.
Bisaduhu Ma Cuni Kartaa Tuna?
Ma ka mid tahay kuwa tuna siiya bisadaha? Hadday sidaas tahay, ka hor intaadan sii wadin, waxaan kugu casumeynaa inaad soo gasho si aad u ogaato in bisaduhu ay cuni karaan tuna iyo in kale iyo sababta.
Sida loo caadeysto bisadda inay wax u cunto ayaan u maleynayaa?
Gali oo raac taladeena si aad u ogaato sida bisadda loo caadeysto inay wax u cunto Waxaan qabaa. Waxaad arki doontaa sida sabirka aad ugu heli doonto. :)
Sidee loo quudiyaa bisad duug ah
Waxaan kuu sheegeynaa sidaad u quudin lahayd bisad duug ah si saaxiibkaa uu qaab ugu ekaado inta noloshiisa ka dhiman. Soo gal oo ka caawi inuu caafimaad qabo.
Bisadeyda ma cuno Waxaan u maleynayaa, maxaan sameeyaa?
War dhogortaadu miyaanay kala jeclayn cuntadiisu? Hadday sidaas tahay, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa waxa la sameeyo haddii bisaddaydu cuntami weydo waxaan qabaa. Soo gal si saaxiibkaa uu dib ugu soo ceshado damacii.
Waxa la sameeyo haddii bisaddaydu aysan rabin inay wax cunto
Dhogortaadu ma rabto inay wax cunto? Hadday sidaas tahay, soo gal oo waxaan kuu sheegaynaa waxaad samaynayso haddii bisaddaydu aysan rabin inay wax cunto iyo sida looga hortago inay mar kale istaagto.
Maxey cuni kartaa bisad xanuunsan
Dhakhtarka xoolahaagu ma kuu sheegay in dhogortaadu fiicnayn? Hadday sidaas tahay, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa waxa bisad jirran cuni karto si ay dhakhso ugu soo kabato.
Fiitamiinnada loogu talagalay bisadaha
Maanta fiitamiinnada loogu talagalay bisadaha waa kuwo aad mooddo, laakiin dhab ahaan ma loo baahan yahay? Maxay dhab ahaan u yihiin? Soo gal oo ilaali saaxiibkaa.
Faa'iidooyinka cuntada bisadda qoyan
Haddii aad ka fikireyso inaad kordhiso qoyska oo aadan aqoon nooca cuntada la bixinayo, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonnaa faa'iidooyinka ay leeyihiin cunnada bisadaha qoyan.
Sidee loo quudiyaa bisad nafaqo-xumo hayso
Ma la kulantay nin timo badan oo miisaankiisu hooseeyo? Hadday sidaas tahay, soo gal. Waxaan kuu sharxeynaa sida loo quudiyo bisadda nafaqo-xumada lihi si ay u soo ceshato caafimaadkeeda.
Bisadda ma la quudin karaa cuntada guryaha lagu sameeyo?
Bisadu ma cuni kartaa cuntada guryaha lagu sameeyo? Mise khatar ayay ku tahay caafimaadka? Waan xalinaynaa shakigaan sidoo kale waxaan kuu sheegi doonaa cuntooyinka aadan siin karin.
Bisadayda ilmaha ahi biyo ma cabbo, maxaan sameeyaa?
Maxaan sameeyaa haddii bisadda ilmahaygu biyo cabin? Biyuhu waa cunno muhiim u ah nolosha, sidaa darteed waxaan kaa caawin doonaa inaad barato cabitaankiisa.
Bisadu ma gebi ahaanba wax bay quudhsataa?
Bisadu ma gebi ahaanba wax bay quudhsataa? Gali si aad u ogaato jawaabta mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee ay weydiyaan bisadaha jecel.
Maxay bisadeyda wax yar u cuntaa xagaaga?
Miyaad ogaatay inuusan saaxiibkaa wax badan cunin bilaha xagaaga? Soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa sababta bisaddaydu waxyar u cuno xagaaga.
Ku quudiso marxalad kasta ee noloshaada bisadda sida ugu wanaagsan #ultimaWaxaan u wada beddelnaa Wadajir
Bisaddaadu waxay soo mari doontaa heerar kala duwan inta ay nooshahay, dhammaantoodna aad ayey uga duwan yihiin midba midka kale. Ugu quud sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Maxay bisaduhu cunaan
Waxaan dooneynaa inaan siino asxaabteena waxa ugu fiican, laakiin run ahaantii ma ognahay waxa bisaduhu cunaan maalin kasta? Si wanaagsan ma u quudinaynaa?
Inbadan oo naga mid ah ayaa waligood isweydiiyey waxa la sameynayo haddii bisadeyda aysan rabin inay cunto croquettes. Raac tilmaamahan si aanad u gaajoon.
Sidee loo doortaa quudiyaha bisadda?
Ma hubo bisadaha quudiya ee la dooranayo? Gali oo waxaad ogaan doontaa faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka noocyada kala duwan ee jira si aad si fiican u dooran karto.
Sheekooyinka runta ah ee ku saabsan dabeecadda dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee bisadda # confíaenuinstinto
Bisadu maalinba maalinta ka dambeysa way naga yaabisaa. Waxay leedahay dareen lixaad oo na soo jiita, dareen ah oo naga dhigaya jacayl. Maxaad ugu daryeeli weyday Dareen dhab ah?
Maxey bisaddeydu u rabin inay wax cunto waxaan qabaa
Ma jeceshahay inaad ogaato sababta bisadeyda aysan u dooneyn inay wax u cunto Waxaan u maleynayaa maxaadse sameyn kartaa si aad ugu qanciso? Kaalay oo ka fiirso khiyaanooyinkaas si uu u wada cuno.
Ma fikrad fiican baa in la cuno cuntada bisadda?
Ma qorsheyneysaa inaad yeelato bisad laakiin ma ogid inay fikrad fiican tahay inaad cunto ku cabirto? Ha walwelin: waan ku caawin doonnaa. Soo Galaya
Talooyin ku saabsan iibsashada cuntada bisadaha ee internetka
Ma u baahan tahay inaad ka dukaameysato internetka laakiin miyaad ka walwalsan tahay in lagu khiyaaneeyo? Gali oo fiiro gaar ah u yeelo tilmaamahan si aad ugu iibsato bisadaha cuntada internetka.
Cuntada bisadda la mamnuucay
Maxay yihiin cuntooyinka la mamnuucay ee bisadaha? Maaddaama aysan waxba cuni karin, waxaan kuu sharraxeynaa waxa aadan siin karin.
Sidee waa dheefshiidka bisadaha?
Ma ogtahay sida dheef-shiidku u eg yahay bisadaha? Waxaan kuu sharxeynaa waxa ay ka kooban tahay iyo, intaa waxaa dheer, waxaan kaa caawin doonaa inaad doorato quudinta la shiidi karo si caafimaadkaagu u fiicnaado.
Ma hubo waxa bisadaha ay tahay inaad iibsato? Waa go'aan aad u dhib badan in la sameeyo. Gali oo waxaan kaa caawin doonaa inaad doorato.
Sida loo quudiyo bisadda ilmaha yar
Miyaad heshay Ey agoon ah oo aadan aqoon sida loo daryeelo? Hadday sidaas tahay, soo gal oo waxaan si faahfaahsan u sharraxaynaa sida loo nuujiyo bisadda ilmaha yar.
Maxay Bisaduhu u Cuni Waayaan Kalluunka?
Waxaa jira dad badan oo layaaban sababta bisaduhu u cuni kari la’yihiin kalluunka, laakiin runti maahan cunno sun ah, inta aan lagu xadgudbin.
Sidee loo quudiyaa bisad yar oo laga tegey
Ma waxaad heshay ilmo dhogor badan oo ma ogid waxa la sameeyo? Gal si aad u baratid sida dhalada loo quudinayo bisad yar oo laga tegey.
Miraha iyo khudradda bisadaha
Haddii aad waligaa isweydiisay inaad bisaddaada siin karto miro iyo khudrad ... jawaabtu waa haa. Gali oo waxaad ogaan doontaa kuwa ku habboon.
Intee in le’eg ayey bisadeeydu cunaysaa
Mid ka mid ah shakiga soo noqnoqda ee kuwa naga mid ah ee la nool kittens ama kuwa dhowaan sameyn doona ayaa ah inta bisaddeydu cuneyso. Hadday taasi tahay kiiskaaga, soo gal.
Immisa jeer ayey bisaddaydu cunaysaa?
Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aad bisad la noolaato, waxaad u maleyneysaa inaad isweydiineyso inta jeer ee ay tahay inay cunto maalintii oo dhan. Halkan waxaad ka heli doontaa jawaabta.
Maxay bisadeeydu cunaysaa?
Suuqa waxaa ku yaal dhowr nooc oo cunto ah, mar walbana ma sahlana in la doorto bisadda ay cuneyso.
Sidee loo kiciyaa rabitaanka bisadeyda? II
Sidee loo kiciyaa rabitaanka bisadeyda?
Barf diet: waa cunno dabiici ah oo aad u hesho bisadaada
Cunnada loo yaqaan 'Barf Cats' ee loogu talagalay bisadaha waa cunto ku saleysan cunno ceeriin iyo dabiici ah oo lagu bixiyo qaybo si sax ah isugu dheellitiran oo isu dheellitiran. Cuntada waxaa ku jira hilib cayriin, cagaar iyo cagaar.